Fiarahan’ny kalaza :: Hanao angaredona an-tsehatra i Bekoto Mahaleo sy i Silo • AoRaha
Fiarahan’ny kalaza Hanao angaredona an-tsehatra i Bekoto Mahaleo sy i Silo
Toko roa anisan’ny nandrasan’ny mpankafy mozika ny fiarahan’i Bekoto Mahaleo sy Silo amina sehatra iray. Etsy amin’ny Trass Tsiadana no hanatanterahan’ireto kalazalahy ireto izany, rahampitso tolakandro amin’ny 4 ora. Na somary kelikely aza ity toerana ity dia azo lazaina ho lehibe ny seho satria mpanakanto roa andrarezin’ny zavakanto malagasy, niaina vanim-potoana samy hafa no hamondrona angovo sy talenta ka hanafana ny lanonana.
Raha tarafina amin’ny talentan’ny tsirairay, haka endrika farimbona an-tsehatra kokoa ny fampisehoana. Mazava loatra fa ny hamerina, hamoha ary hanohy indray ireny hiran’ny taona 70, 80 sy 90 ireny no tanjona. Hisy fizaràna maromaro ny fiarahana. Samy haneho ny mampiavaka azy na i Bekoto na i Silo. Manaraka eo ny fampiaraham-peo. Hisy
fotoana i Silo hivazo ny hiran’i Bekoto sy ny mifamadika amin’izay. Tsy ferana koa anefa ny fisian’ny tolotra tsy ampoizina, araka ny nambaran’ny mpikarakara.
Tsiahivina fa samy ikoizana amin’ny fitendrena zavamaneno samihafa nefa koa samy manana ny mampiavaka azy ireto mpanakanto ireto. Misongadina amin’ny fanoritsoritana an-kira ny tontolo ambanivohitra i Bekoto. Eo koa ilay fomba fihirany somary hafa kely izay ravahan’ ny feon-gitara mandrotsirotsy. Miavaka amin’ny fahaizana mifehy karazana gadona maroloko i Silo. Manana feo miavaka ihany koa ity mpanakanto anisan’ny mpamokatra sy mpanohana ireo manan-talenta vao ity. Iraisan’izy mirahalahy kosa ny fifehezana karazan-java-maneno samihafa, toy ny vato maroafitsoka sy ny gitara ary ny zavamaneno tsofina.
Mozika maneran-tany Hifaninana amin’ny « Afrimma » indray i Shyn
Fahafatesana tany Antsirabe :: Mpianaka niara-namoy ny ainy tao amin’ny farihin’i Tritriva
Baolina lavalava :: Mitaky firaisankina ny fahombiazana